Isbeddel siyaasadeed oo kasoo muuqda deegaanka Soomaalida Itoobiya - Caasimada Online
Home Warar Isbeddel siyaasadeed oo kasoo muuqda deegaanka Soomaalida Itoobiya
Isbeddel siyaasadeed oo kasoo muuqda deegaanka Soomaalida Itoobiya
Toddobaadyadii u dambeeyay Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka dhacay arrimo naadir ah. Arrimahaas ayaa dabo socday isbadal siyaasadeed oo wayn oo dhawaan ka dhacay dalka Itoobiya ka dib markii uu xilka iska casilay ra’iisulwasaarihii hore Hailemariam Desalegn isaga oo arrintaas ku macneeyay in uu waddada u xaarayo in isbaddallo dhab ah ay ka dhacaan dalka Itoobiya, isla markaasna la dhagaysto dalabka shacabka.
Haddaba waxaan halkan ku soo koobaynaa dhacdooyinkii naadirka ahaa ee Dawlad Deegaanka Soomaalida ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyay.
Gobolka Siti ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa ka dhacay mudaaharaadyo lagu diidanaa dawladda si gaar ahna loogu dhaliishanaa nidaamka dib u curashada loo yaqaanno, sida ay dad deegaanka ah BBC-da u sheegeen.
Nidaamka dib u curashada ayaa ah in shaqaalaha dawladda loo wareejiyo deegaan aan ahayn midka uu ka soo jeeda.
Dadka gobolkaas ayaana ka cawday in loo keenay dhallinyaro kale kuwoodii aan shaqo lawada siinin.
Dawladda deegaanka ayaase sheegtay in arrintan looga golleeyahay in lagula dagallamo qabyaaladda iyo nin jeclaysiga.
Dadka arrintan sida guud u dhaliishanna waxay nidaamkaas ku duraan in shaqaalaha laga baddalo guryahoodii iyo qoysaskooda isla markaasna aan dhaqaale kale lagu kabin oo la siiyo isla mushahaarkoodii oo kali ah.
Mudaaharaadyadii ayaa qaboobay wuxuuse si lama filaan ah uga qarxay magalada Wajaale.
Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay mudaharaadkaas sida ay dadka deegaanku u sheegeen BBC.
Xukuumadda Dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay markaas inay billawday in ay soo abaabusho isu soo baxyo ay ku muujinayso taageeradeeda, waxaana deegaanka oo dhan ka dhacay dibadbaxyo waawayn.
Wasiirro, xildhibaanno iyo masuuliyiin kale oo fadhigoodu ahaa magaalada Jigjiga ayaana ka soo muuqday dibadbaxyada lagu muujinayay cududda taageerada dawladda oo deegaannada fogfog ka dhacay.
Masuul Hay’adda Xuquuqda Insaanka Itoobiya ka tirsan oo Jigjiga lagu jir dilay
Waxaa magaalada Jigjiga lagu jir dilay masuulkii hay’adda Xuquuqda Aadanaha Itoobiya u qaabilsanaa Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Jamaal Maxamed Warfaa.
Dad badan ayaa baraha bulshada iskula wadaagay sawirka Jamaal oo u muuqda qof dhaawacyo ku yaalaan oo furaash dul jiifa.
Masuuliyiinta Dawladda Federaalka ah iyo kuwa Deegaanka midkoodna durba kama uusan hadlin arrintaas.
Balse Demisew Benti oo warfaafinta u qaabilsan Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya ayaa BBC u xaqiijiyay in la jir dilay Jamaal wuxuuna intaas ku daray in la diray guddi xaqiiqo raadin ah.
“Waa run Jamaal oo ah masuulkii hay’adda u qaabilsanaa Deegaanka Soomaalida ayaa Jigjiga lagu jirdilay, yaa jirdilay, maxaa loo jirdilay, sidayse arrintaasi u dhacday waa arrin qayb ka ah baaritaanka aan wadno ayuu yiri”.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa marar badan laamaha ammaanka ee dawlad deegaanka Soomaalida ku dhaliilay in ay tacadiyo gaystaan.
Balse arrinta la iswaydiinayo ayaa ah haddii Jigjiga lagu jirdili karo masuulkii loo idmaday ilaalinta xuquuqda aadanaha, waa sidee midda shacabka?
Dareen ka dhashay gabadh meydkeeda laga heley Qabri-Dahare
Xabsi ku yaala magaalada Qabridahar ayaa laga dhex helay gabadh mayd ah oo la sheegay in halkaas ay ku sugnayd wakhti aad u kooban, arrintaasina waxay dhacday 11 bishii Maarso.
Maxamed Xiis Kallane oo gabadha adeerkeed ah oo ku sugnaa magaalada Pretoria ee Koonfur Afrika ayaa BBC-da u xaqiijiyay geerida gabadha, wuxuuna sheegay in gabadha ay qabteen booliiska, saacado markii ay hayeena ay reerka ku wargaliyeen in ay is dishay.
Maxamed Xiis waxa uu intaas ku daray in gabadha meydkeeda la geeyay isbitaalka ciidammada federaalka, kadibna lasoo xaqiijiyay in la dilay.
Gabadhan oo lagu magacaabo Taysiir Cumar Maxamed Cilmi Salal, waxa ay jirtay 20 sano, wali ma aysan guursanin, waxayna u shaqaynaysay dowladda hoose ee magaalada Qabri-dahare, gaar ahaan xaafadda shanaad.
Lama oga sababta loo xirey markii horeba, iyo waxa sababay dhimashadeeda.
“Qoladan meesha joogta, kuwa wax maqlaya ma ahan, baaqna looma diri karo, dhibaatadan alle ha naga dulqaado, tii ugu horeysay ma ahan, tii ugu dambeysayna ma ahan, dilkana hala joojiyo, waa ceeb kusoo korortay Soomaalida” ayuu yiri Maxamed Xiis Kallane oo ku hadlay magaca qoyska gabadha ay ka baxday.
Balse masuuliyiinta Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in gabadhaasi ay is dishay.
Baraha bulshada ayaa aad loogu faafinayaa qoraalo iyo haddalo looga soo horjeeda falka dhacay, waxaana arrintan ka dhashay dareen carol eh iyo mudaaharaad.
Demisew Betni oo hay’adda xuquuqda aadanaha ee Itoobiya u qaabilsan warfaafinta ayaa sheegay in dhacdadan iyo kuwo kalaba la soo gaarsiiyay hay’adda ayna baaritaanno ku hayaan.
Dad maamulka dhaliishan oo Addis Ababa isku arruursanaya
Odayo dhaqameedyo iyo waxgarad u dhashay Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo saluugsan xukuumadda Cabdi Maxamuud Cumar ayaa tagay magaalada Addis Ababa si ay cabasho ugu gudbiyaan dawladda dhexe, sida uu BBC-da u sheegay mid ka mid ah odayadaas.
Odayaas ayaa sheegay in cabashadooda gaarsiiyeen Hay’adda xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya, isla markaasna ay la kulmeen xeer ilaaliyaha guud ee faderaalka iyo masuuliyiin kale oo heer faderaal ah.
“Anagoon diyaarsanayn ayuu damcay in uu nala kulmo ra’iisul wasaaruhu, waxaana codsanay in aan soo diyaargarawno oo cabashadanada markaas u gudbino” ayuu yiri mid ka mid ah odayada.
Markii dhawaan la doortay ra’iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed wuxuu sheegay in shacabka la dhagaysan doono isla markaana uu la hadli doono dhammaan mucaaradka iyo dadka dhaliishan.
Arrintaas ayaa horseeday in ay magaalada Addis Ababa iska xaadiriyaan mucaraadkii Itoobiya oo ay ka mid yihiin masuuliyiinta xisbiga Oromada ee Oromo Democratic Front oo dibadjoog ahaa.
Kooxihii fursaddaas ka faa’iidaystayna waxaa ka mid noqday dadkii ku kacsanaa xukuumadda Jigjiga.
Mucaaradkaas Soomaalida ah ee Addis Ababa ku sugan oo aan magac ku midaysnayn ayaa baraha bulshada ka dhaliila Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xukuumaddiisa, waana arrin naadir ah.
Dad badan ayay layaab la noqotay in dad mucaradsan madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa iyaga oon bareerahooda qarsanaynin.
Dhacdooyinkaasi isbadel ma keeni doonaan?
Waxaa laga yabaa in haddii arrimahaasi ay sii xoogeystaan ay cadaadis ku keenaan madaxweynaha iyo maamulkiisa. Balse inuu dhaco isbadel siyaasadeed oo la taaban karo waxay u baahan tahay labo arrimood midkood :
Midda koobaad: Kala qaybsanaan soo kala dhex gasha Guddiga fulinta ee awoodda badan ee X.D.SH.S.I, kaas oo awood u leh in uu xasaanadda ka qaado madaxweynaha.
Midda labaad: Dawladda dhexe ee faderaalka ah oo si cad u sheegta in aysan ku qanacsanayn hoggaanka Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya soona bandhigta cadaymo.
Labadaas arrimood midkoodna hadda midkoodna ma muuqdaan, sidaas daraadeedna waxay u muuqataa in ay xilka sii hayn doonto xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo looga bartay in uu la jaan qaado isbadalladii sanadihii dambe ka dhacayay dalka Itoobiya.
W/Q: Xasan Cabdullahi Haybe
Soosaare, BBC Soomaali